Heerka Sarrifka Oo shilin Soomaali (SOS) In Yen (JPY) ku nool suuqa sarrifka Forex
Heerka sarrifka Forex simay: 04/07/2022 21:01
Oo shilin Soomaali - Yen qiimaha hadda suuqa sarrifka Forex ee 04 July 2022
21:01:26 (Update heerka Forex ee 59 seconds)
1 SOS = 0.42 JPY
1 JPY = 2.40 SOS
Isha isha Oo shilin Soomaali to Heerka isweydaarsiga Yen waa sarrifka Forex. La soco Oo shilin Soomaali qiimeynta hadda onlayn. Waqtiga soonka ee Oo shilin Soomaali to Yen rate. Eeg sicirka sarrifka daqiiqaddii, saacaddii, ama maalintii.
Shaxda ganacsi Forex Yen - Oo shilin Soomaali ku nool yihiin, 04 July 2022
Shaxda ganacsi Forex Oo shilin Soomaali In Yen ku nool yihiin, 04 July 2022
Qariidada Oo shilin Soomaali to Yen sicirka sarrifka dusheeda 04 July 2022 ”waxaa lagu soo bandhigay websaydhkeenna. Si si wax ku ool ah loola socdo heerka sarrifka ee Forex, waxaan ku muujineynaa jaantus. Qariidada, waxaad si dhaqso ah u aragtaa kor u kaca ama dhicitaanka lacagta. Qariidada ayaa ah mid isdhaafsan, waad kufiirin kartaa.
Beddelaan Oo shilin Soomaali In Yen Oo shilin Soomaali In Yen Heerka Sarrifka Oo shilin Soomaali In Yen taariikhda qiimaha sarrifka
Ganacsi Online Oo shilin Soomaali (SOS) si Yen xilligan
Daqiiqad kasta waxaan raadraacnaa Oo shilin Soomaali to Yen sicirka sarrifka. Isbedelka ku yimid Oo shilin Soomaali ( SOS) ku Yen heerka daqiiqadani waa - 0.18 JPY. Hal daqiiqad sarrifka ah ee Oo shilin Soomaali ee ku miiska 10 ka mid ah Yen Ku dhajinta habboon ee macluumaadka daqiiqadda daqiiqadda.
Ganacsi Online Oo shilin Soomaali (SOS) si Yen ganacsi ee la soo dhaafay saac
Taariikhda sarrifka saacad kasta. Dhaqdhaqaaqa Oo shilin Soomaali ( SOS) ku Yen saacadan waa - 0.18 JPY. Shaxdu waxay muujineysaa heerka Oo shilin Soomaali si Yen saacad walba. Way ku habboon tahay in la isbarbar dhigo isbeddelada sicirka sarrifka saacad kasta.
Ganacsi Online Oo shilin Soomaali (SOS) si Yen arrimuhu maanta 04 July 2022
21:01 19:59 18:58 17:57 16:56 15:55 14:54 13:53 12:52 11:51